Brontophobia: kedu ihe ọ bụ, gịnị bụ ihe mgbaàmà ya na otu esi emeso ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Onye ọ bụla na-atụtụbeghị mgbe oké ifufe, àmụ̀mà ma ọ bụ oké égbè eluigwe na-atụ ụjọ. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị bụ mgbe ọkụ dara n'akụkụ dị nso ma ọ bụ mgbe egbe eluigwe dara na-adasi ike n'ụlọ niile. Agbanyeghị, enwere ụjọ na-atụkarị na nwata gbasara àmụmà na égbè eluigwe A maara ya dị ka brontophobia. Ọ bụ ihe ọzọ karịa ụjọ nke àmụ̀mà na égbè eluigwe nke mmadụ na-enwe kemgbe ọ bụ nwata nakwa na ọ bụrụ na e mesoo ya n’oge, o nwere ike ọ gaghị agbanye mkpọrọgwụ n’agbụ ya.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu ihe brontophobia, ụdị mgbaàmà ọ nwere na ihe a ga-eme iji gwọọ ya nke ọma.
1 Gịnị bụ brontophobia
2 Nsogbu nchegbu
3 Mgbaàmà nke brontophobia
3.1 Ahụ mgbaàmà
3.2 Ihe mgbaàmà
3.3 Àmà omume
4 Otu esi emeso brontophobia
Gịnị bụ brontophobia
Nsogbu a bụ nchekasị ma na-emetụta ụjọ ụjọ oké ifufe. Àmụmà na égbè eluigwe na-emekwa ka mmadụ na-atụ ụjọ. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na égbè eluigwe na-adasi ike, onye nwere brontophobia nwere ike ịmalite ịtụ ụjọ, ụjọ na-atụ ya, na-enwekarị mmetụta na-adịghị mma. Ọ bụ ihe gbasara a ikwubiga okwu ókè, ụjọ na-enweghị atụ na egwu na-enweghị nchịkwa nke ahụ na-aghọ nzaghachi nchegbu mgbe ọ bụla onye ahụ gụrụ ndị ọrụ a nke okike.
Dika nsonaazụ nke nzaghachi nchegbu, repertoire nke omume, omume na omume dị iche iche na-esite na ebumnuche nke izere ọnọdụ a na-eweta ụjọ na onye ahụ. Onye a chọrọ ịgbanarị ọnọdụ na-enye ya nsogbu ozugbo o kwere mee.
Nọmalị Brontophobia na-amalitekarị ịmalite na nwata. Maka ụmụaka na-atụ egwu oke ifufe bụ ihe okike. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ụjọ a na-abawanye ma na-abawanye ka oge na-aga, ọ nwere ike gbanwee ghọọ ezigbo ụjọ. Ọ bụrụ na oké ifufe na-adịkarị ebe onye nwere brontophobia bi, phobia a nwere ike igbochi mmepe nke ndụ onye ahụ. Were ya na onye nwere ụjọ nke oke ifufe nọ na mpaghara ebe enwere oke 1 ma ọ bụ 2 kwa ọnwa. Ọ ga-ekpughere egwu na-enweghị isi maka eziokwu dị mfe nke ịghara ịgwọ ya nke ọma site na nwata.
Enwere ọgwụgwọ uche dị mma maka ndị nwere phobia a.
Iji mara na ị nwere brontophobia, nsogbu ụjọ bụ ezigbo ihe nrịba ama iji lezie anya. Ihe mgbaàmà kacha pụta ma ọ bụ nsonaazụ nke brontophobia bụ ịhụ na onye na-arịa ya na-agba mbọ izere ma ọ bụ gbanahụ ọnọdụ mgbe niile ọ na-atụ egwu. Dịka ọmụmaatụ, naanị site n'ịhụ ụfọdụ igwe ojii, gbalịa ịkwaga n'akụkụ ọzọ ebe enweghị. Iche na oke mmiri ozuzo ga-eme na-eme ka ụjọ jide ya, na-agbakasị, na-atụkwa ụjọ.
Ihe ndị a bụ njirimara bụ isi nke onye nwere brontophobia:
Onye a ga- oke egwu na erughị eru maka ọnọdụ ọ dị.
Jọ ị na-atụ anaghị enwekarị mgbagha. Ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ma ọ bụ dabere n'echiche ndị na-ezighi ezi. Echiche ndị dị ka àmụ̀mà pụrụ ịgba n'ime ụlọ, na ụda égbè eluigwe pụrụ imebi windo, wdg.
Ndị na-atụ egwu a enweghị ike ịchịkwa ya, ọbụlagodi na ị nwere onye nọ gị n'akụkụ na-akwado gị ma na-agwa gị na ọ dịghị ihe ọjọọ ga-eme gị.
Dịka, onye nwere brontophobia na-agba mbọ ịgbanahụ ọnọdụ ebe ọ ga-atụ ụdị ụjọ ahụ.
Ọ bụrụ na onye a anaghị atụ ụjọ ọgwụgwọ, ọ nwere ike ịdịgide adịgide ma weta nsonaazụ ka njọ.
Mgbaàmà nke brontophobia
Nke mbụ na nke kachasịkarị bụ nsogbu ụjọ ahụ a kpọtụrụ aha n’elu. Nke a apụtaghị na mmadụ niile ga-egosipụta phobia n’otu ụzọ. Onye ọ bụla nwere ụzọ ha si ekwupụta onwe ha ma anyị nwere ike ịhụ, n'ozuzu ya, gịnị bụ isi ihe mgbaàmà:
Egwu na nchekasị a na-enwekarị na-enye usoro mgbanwe na ngbanwe nke ahụ. Anyị zutere:
Nwepu obi ojoo.
Nnukwu iku ume kwa otu oge.
Onye ahụ na-adị mkpụmkpụ.
Erughị ala na akwara.
Mmiri na-agba agba
Loss nke nsụhọ ke kasị njọ ikpe.
Brontophobia enweghị naanị mgbaàmà anụ ahụ ebe anyị nwere ike ịghọta site n'èzí nhụjuanya nke onye ahụ mgbe anyị hụrụ na oke mmiri ozuzo dị ma ọ bụ na-abịa. E nwekwara mgbaàmà ihe ọmụma. Ọmụmaatụ, Onye emetụtara nwere ike ịnwe echiche na-enweghị nchịkwa na ntakịrị nghọta banyere ezigbo ihe egwu nke oke ifufe na-ebute. A na-eche na nsonaazụ nke ihu igwe na-akpata ọdachi. Kwere ya ma ọ bụ na ọkwaghị, ọ na-atụkwa ụjọ iwepụ uche ya na amaghị etu esi eme akọ. Maka nke a, ị na-achọkarị izere ọnọdụ ebe ebidoro gị.
Ihe mgbaàmà abụọ a gara aga na-eduga n'omume doro anya na ndị ọzọ. Ihe kachasị egosi bụ ịgbanahụ ọnọdụ a na - atụ ụjọ ma ọ bụ gbaa ọsọ mgbe ihe mkpali ahụ apụtaworị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na onye ahụ enweghị ike ịgbanahụ oké ifufe ahụ, ha ga-anwa ịme ụdị ihe niile ka ịghara iche banyere ya ma ọ bụ gbalịa ichefu na ha nọ n'oké ifufe
Otu esi emeso brontophobia
Brontophobia nwere ike ịbụ oria nke ịla n'iyi, ọkachasị ma ọ bụrụ na onye na-arịa ya na-ekpughere oke ifufe ndị a n'ihi ihu igwe na-amasị ya. Usoro ọgwụgwọ na omume na-enweta nsonaazụ dị mma n'ịgwọ phobia a.
Mgbe ịmalitere ọgwụgwọ, ị na-anwa ịme usoro dị iche iche na ebumnuche nke iwepu ihe mgbaàmà 3 anyị hụrụ na mbụ. Site na nhazighari uche, nkwenkwe na-enweghị isi banyere oké ifufe nwere ike gbanwee ka mmadụ wee belata ihe mgbaàmà ndị ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ maara na oke ebili mmiri ahụ adịghị ize ndụ n'akụkụ dị otú ahụ, ọ ga-adị jụụ. Sayensị na-enyere ọtụtụ aka na nke a.
N'aka nke ọzọ, akụkọ na-adịghị mma gbasara ọkụ ọgbụgba na-eme ka ndị mmadụ na-atụkwu egwu. N'oge ọgwụgwọ, ị ga-ama otu esi akọwara ha mana n'etinyeghị ha ma ọ bụ ghaara ha ụgha.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere brontophobia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Brontophobia